Fiiq Fiiq ah shimbiraha duurjoogta ah aan xad lahayn | Martech Zone
Fiiq Fiiq ah Shimbiraha Duurjoogta Aan Xaddidnayn
Wednesday, September 12, 2007 Axad, Oktoobar 4, 2015 Douglas Karr
Iyada oo usbuucyada 60 ee shaqada ee toddobaadyadii la soo dhaafay, waxaa caqabad ku noqotay in lagu daro 20 ama 30 kale mashruuc khariidadeynta aan u sameynayo Shimbiraha Duurjoogta Aan Xaddidneyn. Berrito waa maalin weyn, in kastoo, marka WBU ay muujiso waxqabadka qaar ka mid ah xayeysiisyadeeda.
Runtii waxaan ku soo ururinay waxqabad badan boggan, waxaana rajeyneynaa inaan waxbadan ka qabanno. Waxaa jira dib-u-celin maamul oo adag oo dukaamada xitaa ay cusbooneysiin karaan macluumaadkooda ama ku dhalan karaan goobta juqraafi ahaan. Astaamaha kale qaarkood:
Dejinta deegaanka ee loo yaqaan 'GeoIP' oo go'aamisa haddii lagu soo bandhigayo mitir ama heer. GeoIP waxay saadaalineysaa goobtaada iyo gobolkaaga waxayna kugu maleegaysaa khariidada iyadoo lagu saleynayo cinwaanka IP-ga ee codsanaya bogga.
Daaqadaha macluumaadka waa isku-dar. Haddii aad gujiso khariidada, waxay ka socdaan faylka KML. Haddii aad gujiso meelaha ku yaal dhinaca bidix, waxay ku shubmayaan lakab qaraabo u ah khariiddada.
Tilmaamaha ayaa sidoo kale lagu daray, haddii aad bixiso cinwaan ka badan intaad si fudud uga bixin karto gobol ama gobol. Tani waa markii iigu horreysay ee aan geeyo Tilmaamaha Google, laakiin waa wax laga naxo. Hal shay oo ah in la ogaado… Xaqiiqdii uma gudbiyo cinwaannada geocode, waxaan si fudud ugu daraa loolka iyo dhigta dhabta ah waxaanan ku qariyaa magac (Halkan @ 43, -120).
Sawirro horay ayaa looga shaqeeyay daaqadaha macluumaadka, laakiin dhab ahaan ma hayno wax sawirro ah oo aan ku keydinay xilligan. 🙂 Hal talaabo markiiba. Hadaad jeceshahay inaad fiiriso, waad booqan kartaa Shimbiraha Duurjoogta ah Khariidadaha aan xadidnayn. Waxaan sheegi lahaa in softiweerku yahay Alpha diyaar u ah inuu tago Beta marka aan ka helno codsiyada hagaajinta macaamiisha.
Mahad gaar ah ayaan u hayaa Stephen, isagu wuxuu ahaa shaqadeyda howshaan wuxuuna qabtay shaqo aad u badan. Wuxuu u wareegay Jarmalka sanad dugsiyeedka laakiin waxaan rajeynayaa inaan sii wado geynta koodhka mashruucan. WBU waa urur fantastik ah farxadna way u ahayd inay la shaqeeyaan. Waxaan rajeyneynaa inaan si xad dhaaf ah u bixinno mashruucan maadaama aan rajeyneyno inaan u dirno codsigan ururada kale ee doonaya arjiga Khariidaynta PHP. Stephen wuxuu noqon doonaa wehelkeyga ganacsiga… uma xuma nin wali ku jira dugsiga sare!
Qaar ka mid ah kheyraadka dheeriga ah waxay ahaayeen tusaalooyinka koodhka Mike iyo sidoo kale Ben, horumariye leh Rarebird kaasoo hirgaliyay hirgalinta cajiibka ah ee Khariidadaha Google at Fanim.
Tags: tilmaamahakhariidadaha google apikhariidayntaKhariidadaharaadiyaha dukaankakeydka dukaanka
Waxaan jeclaan lahaa in dhammaan Ganacsiga Iibinta Baabuurta ay sidan ku dhammaadaan!
Ma ka khafiifsan tahay iPhone-ka?
Sep 13, 2007 at 5: 03 AM
Waad ku salaaman tahay Doug - waan kuugu hambalyeynayaa adiga iyo kuwa kale ee horumariyaba dhammaystirka mashruucan - Waan hubaa in milkiilayaasha dukaamada WBU ay u bogi doonaan tan. In badan iyo in ka badan oo ka mid ah macaamiishooda (iyo milkiileyaasha dukaamada suurtagalka ah ee xiiseynaya inay iibsadaan xayeysiin) waxay helayaan Shimbiraha Duurjoogta ah ee aan Xaddidneyn iyada oo loo marayo Webka, taas oo ka dhigaysa mid muhiim ah in khibradooda ugu horreysa ee shirkaddu ay noqoto mid wanaagsan. Hirgelinta khariidaynta cusubi waa hubaal inay tahay horumar ka sii badan khariidadihii ma-guurto ee hore. Waxaan rajeyneynaa inay taasi kuu abuureyso ganacsi cusub - shaqo fiican markale.
Sep 13, 2007 at 9: 21 AM
Hubi in kani uu bilaabmayo inuu ku sii socdo isbeddel buuxa. Waad ku mahadsantahay inaad iga reebtay. Had iyo jeer waa wax lagu farxo.
Sep 13, 2007 at 9: 06 PM
Kuuma sheegi karo sida ay u cajabeen Shimbiraha Duurjoogta ah ee aan xadidneyn ee xayeysiinta leh kuwaas oo helay heer sare maanta! Si rasmi ah ugama uu jirin ajandaheena laakiin waxaan weydiistay daqiiqado kooban bilawga maalinta si aan u muujiyo. Waxay isla markiiba garteen horumarada layaabka leh ee ku yimid alaabkeenii dukaanka ee hadda. Waxay si gaar ah ugu farxeen jihooyinka wadista wadista.
Doug, waxaad ahayd farxad inaad sidoo kale lashaqeyso. Qofkasta oo meesha jooga oo raadinaya karti, heellan iyo ujeedo macaamiil ujeedo leh khalad kuguma samayn karo Waad ku mahadsantihiin dhammaan shaqooyinka adag iyo mahadsanid kooxdaada. Niman yahow waxaad iga dhigaysa qof fiican.
- Bo Lowery,
Shimbiraha Duurjoogta Aan Xaddidnayn, Inc.